တရုတ်လေယာဉ်မှူးတစု ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံပြည့်နဲ့ လော့စ်စအိန်ဂျိစ်မြို့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာတွေ့ရစဉ်။ (၁၁-၃၀-၂၁)
ကမ္ဘာမှာ အိုမီခရွန် မျိုးကွဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာ တက်လာတဲ့အတွက် ခရီးသွားလာခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်ပြီး ‌ဥရောပ နိုင်ငံတချို့ရှိ ဆေးရုံတွေက လူနာတွေကို လက်ခံဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
ယူကေ၊ နော်ဝေနဲ့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ခရီးသည်တွေ ဝင်ခွင့်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ပထမဆုံး အိုမီခရွန်လူနာကို တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ တားမြစ်ခရီးသွား နိုင်ငံစာရင်းမှာ အဲဒီ နိုင်ငံတွေကို ထပ်ထည့်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ကြီး Luhut Binsar Panjaitan က ပြောပါတယ်။
အလားတူပဲ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ အခြား တိုင်းပြည်ရှစ်ပြည်ကို အစ္စရေးက ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာ မဲပေး ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ် Naftali Bennett ရဲ့ရုံးက ခုလို ကြေညာလိုက်တာပါ။ အဲဒီ တိုင်းပြည်တွေက ပြန်လာတဲ့သူတွေဟာလည်း ကွာရန်တင်းဝင်ကြရမယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှားမှာ အိုမီခရွန်က ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ပျံ့နှံ့နေတယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးDr. Anthony Fauci က NBC သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဆေးရုံစနစ်မှာ တကယ့် ပြဿနာက ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ အကျုံးဝင်လျက်သားနဲ့ ကာကွယ်ဆေး မထိုးကြတဲ့သူတွေ အတော့်ကို များနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ‌ဒေါက်တာဖောင်ချီက ပြောပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဒေသမှာတော့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှုန်း မြင့်မားပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းက နည်းတဲ့အတွက် အကောင်းမြင်ထားသလို ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလတွေကြောင့် အသည်းအသန် လူနာခန်းတွေမှာ လူနာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ အိုင်စီယူ အကြီးအကဲ Rene Lehr က အေပီ သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ်။
Omicron ကိုဗဈမြိုးကှဲကူးစကျမှုကွောငျ့ ခရီးသှားလာမှုတှကေနျ့သတျ
ကမ်ဘာမှာ အိုမီခရှနျ မြိုးကှဲ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျတာ တကျလာတဲ့အတှကျ ခရီးသှားလာခှငျ့တှေ ပိတျလိုကျပွီး ‌ဥရောပ နိုငျငံတခြို့ရှိ ဆေးရုံတှကေ လူနာတှကေို လကျခံဖို့ ပွငျဆငျနကွေပါတယျ။
ယူကေ၊ နျောဝနေဲ့ဒိနျးမတျနိုငျငံက ခရီးသညျတှေ ဝငျခှငျ့ကို အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက ပိတျပငျလိုကျပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက ပထမဆုံး အိုမီခရှနျလူနာကို တှရှေိ့ပွီးတဲ့နောကျ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ တားမွဈခရီးသှား နိုငျငံစာရငျးမှာ အဲဒီ နိုငျငံတှကေို ထပျထညျ့လိုကျရတာဖွဈတယျလို့ ဝနျကွီး Luhut Binsar Panjaitan က ပွောပါတယျ။
အလားတူပဲ အမရေိကနျ၊ ကနဒေါနဲ့ အခွား တိုငျးပွညျရှဈပွညျကို အစ်စရေးက ခရီးသှားလာခှငျ့ ပိတျလိုကျပါတယျ။ အစိုးရအဖှဲ့မှာ မဲပေး ဆုံးဖွတျပွီးတဲ့နောကျ အစ်စရေး ဝနျကွီးခြုပျ Naftali Bennett ရဲ့ရုံးက ခုလို ကွညောလိုကျတာပါ။ အဲဒီ တိုငျးပွညျတှကေ ပွနျလာတဲ့သူတှဟောလညျး ကှာရနျတငျးဝငျကွရမယျလို့ သတျမှတျလိုကျပါတယျ။
ကမ်ဘာတလှားမှာ အိုမီခရှနျက ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ ပြံ့နှံ့နတေယျလို့ အမရေိကနျ သမ်မတရဲ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာအကွံပေးDr. Anthony Fauci က NBC သတငျးဌာနနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ပွောလိုကျပါတယျ။ အမရေိကနျ ဆေးရုံစနဈမှာ တကယျ့ ပွဿနာက ကာကှယျဆေးထိုးဖို့ အကြုံးဝငျလကျြသားနဲ့ ကာကှယျဆေး မထိုးကွတဲ့သူတှေ အတေျာ့ကို မြားနတောပဲ ဖွဈပါတယျလို့ ‌ဒေါကျတာဖောငျခြီက ပွောပါတယျ။ ဂြာမနီနိုငျငံ အနောကျမွောကျပိုငျး ဒသေမှာတော့ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးနှုနျး မွငျ့မားပွီး ကူးစကျမှုနှုနျးက နညျးတဲ့အတှကျ အကောငျးမွငျထားသလို ခရဈစမတျနဲ့ နှဈသဈကူးကာလတှကွေောငျ့ အသညျးအသနျ လူနာခနျးတှမှော လူနာလကျခံနိုငျဖို့အတှကျလညျး ပွငျဆငျထားတယျလို့ အိုငျစီယူ အကွီးအကဲ Rene Lehr က အပေီ သတငျးဌာန ကို ပွောပါတယျ။
#Covid19 #OmicronVariant #VOABurmese
#အိုမီခရှနျ #Dr.AnthonyFauci #ကိုဗဈကာကှယျဆေး #ဗှီအိုအေ